कोरोनाका बिरामी भेटिँदा | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला..
कोरोनाका बिरामी भेटिँदा
९ श्रावण २०७७, शुक्रबार १५:५५
लगभग १० वर्ष हुन लाग्यो मैले मेडिकल क्षेत्रमा काम गरेको । म आइसियुमा काम गर्छु । टाउको, नसा, स्ट्रोकका बिरामीहरुको केस हेर्न गर्छु । अहिले भने कोभिड-१९ का लागि भनेर छुटै कोरोना वार्ड राखेको छ । त्यो वार्डको सिनिएर छु म ।
कोभिड-१९ सबैका लागि नयाँ कुरा हो । पहिले, खबर हेरेर विभिन्न देशमा कोरोनाको महामारी भएको थाहा पाउँथेँ । नेपालमा पनि कोरोना आयो भने कसरी काम गर्नु होला भनेर डर लाग्थ्यो । नेपालमा कोरोनाका केस देखिन थाल्दा म अलि अत्तालिएको थिएँ । कसरी सुरक्षित हुने भन्ने थाहा थिएन । कोरोना एकदमै छिटो फैलिरहेको थियो ।
त्यतिखेर एमर्जेन्सी वार्डमा पिपिइ २-३ वटा मात्रै थिए । वार्डमा पनि भरपर्दा पीपीई थिएनन् । कामचलाउ मात्र थिए ।
अस्पतालमा बिरामी आउँदा एक प्रकारको डर लाग्थ्यो । बिरामी कहाँबाट आएको होला ? कस्तो बिरामी होला ? भनेर । सुरुसुरुमा हाम्रोमा पनि कोरोना लक्षण भएका केस आउन सक्छन् भन्दा एकदम डर लागेको थियो । नजाउँ कि क्या हो काममा, विदा लिउँ कि जस्तो पनि लागेको थियो । फेरि अर्को मनले सोचेँ, हैन, यस्तै बेला त हो नि काम गर्नुपर्ने । झन् यत्रो वर्ष भयो काम गरेको । यस्तो अवस्थामा छोड्दा के हुन्छ ? मैले यस्तो गरेँ भने जुनिएरले के सिक्छन् ? उनीहरुलाई हौसाला दिनुपर्ने बेलामा मै पछि हट्नु हुन्न भन्ने लाग्यो ।
मैले आफूभन्दा सानालाई भेदभाव गरिनँ । उहाँहरुका कामको निगरानी गर्छु । साथै उहाँहरुका कुराकानी सुन्ने पनि गरेकी छु । उहाँहरुलाई गाइड पनि गर्छु ।
कहिलेकाहीं केही जुनियरहरुले ‘दिदी काम गर्न डर लाग्छ’ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । आफूलाई केही भइहाल्यो भने के गर्नेहोला ? अरुभन्दा पनि परिवारको चिन्ता लाग्ने गर्छ भन्नुहुन्थ्यो । स्वाभाविक पनि हो डरलाग्नु । आफ्नो परिवारको चिन्ता गर्नु । तैपनि म उहाँहरुलाई सम्झाउने गर्थें — आफ्नो मनोबल नगिराउनुहोस् । हार नमान्नुहोस्, तपाईंहरु नै पछि हटे कसले सेवा गर्ने बिरामीको ? हाम्रो पेसा अरुको सेवामा समर्पित छ । यस्तो विपत्‌मा हामीले हार मान्नु हुन्न ।
उहाँहरुले काम नै गर्दिनँ भनेर चाहिँ भन्नुभएन । सबै जना सहयोगी हुनुहुन्छ । अस्पतलामा अरु सिनियरहरुले नआत्तनुहोला, सावधान हुनुहोला, केही हुन्न भन्नुहुन्छ । अब त हामी बानी परिसक्यौँ ।
हाम्रो परिवार ठूलो छ । घरपरिवारका सबै जनाले मलाई हौसला दिनुहुन्छ । सुरुमा केही दिन आत्तिए पनि पछि उहाँहरुले मलाई सुरक्षित भएर काम गर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । कोरोना लागिहाल्यो भने पनि आत्तिहाल्नु पर्ने केही छैन रहेछ ।
घरको साथ पाएर पनि होला मलाई काम गर्न अझै हौसला जागेको ।
म सावधान हुन्थेँ । तर घरमा अरुबाट अलग भएकी चाहिँ छैन । त्यसो गर्न सम्भव पनि भएन । बाथरुम छुटै हुने कुरा भएन । किचेन पनि हामी सबैको एउटै छ । त्यसैले म कहिले अस्पतालमै नुहाएर घर जान्छु । आफूलाई स्यानिटाइज गरेर जान्छु । घर पुगिसकेपछि लुगा फेर्छु । घरमा पनि गएर सरसफाइ गरिहाल्छु ।
छरछिमेकीले पनि मलाई राम्रो व्यवहार गरे । मेरो घर वरिपरि आफ्नै नातेदार बस्ने गर्नुहुन्छ । त्यही भएर पनि होला त्यस्तो अप्ठेरो भएन । उहाँहरुले बुझ्नुभयो । मेरो आफ्नै घर भएर पनि सजिलो भयो । आफ्नो घर नभएको भएर गाह्रो हुन्थ्यो होला । कतिपय घरबेटीले कुरा बुझ्दैनन् ।
पहिलोपल्ट पीपीई लगाउँदा अप्ठेरो लाग्यो । सास थुनिए जस्तो भएर पसिना आयो । काम गर्दा पनि के के नमिलेको जस्तो हुन्थ्यो । बानी नभएर पनि होला ।
हाम्रो १२ घण्टाको ड्युटी हुने गर्थ्यो । ६ घण्टा एक जनाले लगाउने अनि अर्को ६ घण्टा अर्कोले पीपीई लगाएर पालैपालो काम गर्ने गरेका छौं ।
म काम गर्ने अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमित भेटियो । हुन त मेरो आमनेसामने भएको बिरामी होइन । तर पनि थप सावधान भएकी छु ।
यो एउटा अच्चमको केस थियो । एक जना बुबा हाम्रो अस्पताल भर्ना हुनुभएको थियो । एकदमै हँसिलो, सबैसँग बोल्ने गर्नुहुन्थ्यो । हामीलाई काम गर्न हौसला दिनुहुन्थ्यो । ‘नानी मसँग डराउनु पर्दैन, है’ भन्नुहुन्थ्यो ।
उहाँको पसल रहेछ । पसलमा पनि ग्राहकभन्दा टाढा रहेर बिक्री गर्ने गरेको थिएँ भन्नुहुन्थ्यो । उहाँको पीसीआर जाँच्न पठाएको थियो । उहाँ डिस्चार्ज भएको ३ दिनपछि रिपोर्ट आयो — पोजेटिभ । उहाँ कतै जानुभएको थिएन । उहाँमा कोरानाका लक्षण पनि थिएनन् । हामी सबै जना आत्तियौँ । अच्चम पनि लाग्यो, यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर ।
कहिलेकाहीं भने कोही बिरामी कुर्नेहरुले दुःख दिनुहुन्थ्यो । पीसीआर गर्न पठाउनुपर्छ भन्दा उहाँहरुले पर्दैन हाम्रो बिरामीलाई कोरोनाको लक्षण छैन भनेर झगडा गर्नुहुन्थ्यो । उहाँहरुलाई सम्झाउनै गाह्रो पर्ने ।
बौद्धबाट एक जना बिरामी आउनुभयो । उहाँका आफन्तले उहाँको पीसीआर टेष्ट गराउन मान्नुभएन । हामीले उहाँलाई सम्झायौँ । जाँच्दा ती बिरामीमा कोरोना देखियो ।
घरमा कहिले कसैले आफ्नो ब्लडप्रेसर चेक गरिदेऊ भन्नुहुन्छ, कहिले के भन्नुहुन्छ । अस्पतालमा संक्रमति आइसकेपछि मलाई घरपरिवारको चिन्ता लाग्यो । मेरो घरमा बच्चा अनि बुढाबुढी हुनुहुन्छ । त्यसैले म अस्पतालमै बस्न थालेँ ।
कहिलेकाहीं ठिकै पनि हुँदो रहेछ अस्पतालमा यसरी बस्न । यहाँ अरू स्टाफ पनि बस्नुभएको छ । ड्युटीको समयमा ड्युटी मात्रै हुन्छ । आफूलाई लागेका कुराकानी गर्न पाइँदैन । अस्पतालमै बस्दा चाहिँ कुराकानी गर्न पाइयो, अनुभव एकअर्कालाई बताउन पाइयो । हामी कहिले क्याटिनमा खान्छौँ, कहिले घरबाट ल्याइदिनुहुन्छ ।
कहिलेकाहीँ घरको न्यास्रो लाग्छ । भाइले घर आए भइहाल्छ नि भन्छ । तर म ड्युटीमै भएको बेला बिरामीमा संक्रमति भेटिएकाले आफ्नो परिवारलाई जोखिममा पार्न मन लागेन । पाँच दिन भयो अस्पतालमा बस्न थालेको ।
मैले मेरो पीसीआर टेष्ट गर्न पठाएको छु । रिपोर्ट नेगेटिभ आयो भने मात्र घर जान्छु ।
सरकारले कोरोना मात्र देख्यो, हाम्रो चुल्हो नबलेको देखेन !
१६ आश्विन २०७७, शुक्रबार १२:१३
लकडाउन नै महत्वपूर्ण अस्त्र रहेछ
२४ श्रावण २०७७, शनिबार ०९:४४
चन्द्र प्रकाश घर्ती
Total Visits: 17,005